Azia Atsimo: Politika, Hasambarana, Finoana Ary Vorona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2018 8:47 GMT
Ireo vaovao farany indrindra avy amin'ireo blaogy isankarazany mikasika ireo firenena Azitika Tatsimo manaraka:
Miatrika krizy politika i Bangladesh. Unheard Voices (Feo Tsy Re): Milaza vaovao mikasika ny fihetsiketsehan'ny olompirenena ao Bangladesh ny vondrona blaogy Drishtipat, hetsika izay mamporisika ny olona hitondra famantarana mainty ho fitakiana fifidianana malalaka sy tsy mitanila ary hampitsahatra ny herisetra politika misy ary ny fijalian'ireo vahoaka.
Misitraka anjara mitovy daholo ireo ireo antokom-pivavahaba goavana rehetra ao Bangladesh raha resaka andro tsy fety ara-pivavahana. Miresaka mikasika ny fety iray fanaovana batisa tao Bangladesh i Andrew Morris an'ny Morris the Pen
Manana mpakasary manantalenta maromaro i Bangladesh. Ananan'i Shahidul Alam avy amin'ny ShahidulNews ny antsipirihany mikasika ny Chobi Mela IV, fetibe iraisam-pirenena mikasika ny Fakàna sary ao Bangladesh miaraka amin'ireo rohy marobe, ireo sary ary ireo fanazavana avy ao ambadika.
Mampahafantatra i Bruno Giussani avy amin'ny Lunch Over Ip fa noraisin'ireo mpiasam-panjakana ao Bhutana ny fahapahankevitra mifototra amin'ny hoe handray anjara amin'ny fahasambarana iraisan'ny firenena ry zareo, fa tsy araka ny fijerin'ireo mpahay toekarena. Tsy mahagaga, i Bhutan no firenena fahavalo sambatra indrindra eto ambonin'ny tany.
Kanefa, firenena mbola andalam-pandrosoana foana i Bhutan. Murray Angus Gunn avy amin'ny One People, Many Cultures (Vahoaka tokana, Kolontsaina Maro), maneho hevitra fa mbola rafitra fanaovana tsinjery ny rafitra fanabeazana ao Bhutan.
Matanjaka be ny rohy ara-toekarena misy eo amin'i Bhutan sy ny India mpiray vodirindrina aminy. Mitatitra eo amin'ny tambajotra i Kuensel fa teratany Indiana iray isaky ny 10 miditra ao Bhutan avy amina tanàna ao amin'ny fanjakana Phuentsholing no manambara fa ny ‘fanangonana latsakemboka’ no anton'ilay fitsidihana.
Niteraka fiarahana mpilalao sarimihetsika lahy sy vavy tsiroaroa marobe i Bollywood. Sakshi Juneja an'ny To Each Its Own nikarakara fitsapankevitra iray hitadiavana izay fiarahan-droa tena mafana indrindra ao Bollywood. Somary mahaliana ireo vokatra.
Mandrakizay ny ady eo amin'ny fivavahana sy ny siansa. Manahy i Selva avy amin'ny Scientific Indian fa tsy misy fanantenana ny finoana ara-pivavahana ary miankina amin'ny fanantenana ny siansa.
Ao anatin'ny tsy filaminana politika, mitohy hatrany ny fiainana ao Nepal. Manana ireo sary sy antsipirihany i Dinesh Wagle avy ao amin'ny United we blog, mikasika ny Mozika, ny Dihy ary ny Fety Andalambe ao Thamel.
Tsy mila fangorahana ireo vehivavy, fahafahana hanana tsy fiankinan-doha ara-toekarena no ilain'izy ireo. Alex sy Heather avy amin'ny Our Six Months miresaka ny fomba hahafahan'ny fianarana ho mpitarika mpitsangatsangana an-tendrombohitra mba hampahaleo-tena an'ireo vehivavy ao Nepal.
Malahelo i Suroor avy amin'ny Achelois noho ny fanolanana sy ny fanapahana ratsam-batana nataon'ny tafika pakistaney tamin'ireo vehivavy Bangladeshi maherin'ny 400 000, nandritra ny ady fanafahana an'i Bangladesh tamin'ny taona 1971. Tamin'ny filazàna fa “ny firaisana ara-nofo amin'ny havana akaiky dia mangirifiry kokoa noho ny fanolanana ataon'olona tsy fantatra, voadaroka izy noho ny hoe ahoana no ahafahan'ny vahoaka ihany (Pakistaney tsy mivaky) afaka manome henatra sy hirifiry tahaka izany.
Manoratra i Adil Najam avy amin'ny Pakistaniat fa noho ireo antony marim-pototra dia voarara ao Karachi ankehitriny ny Fanaovana ‘Taingim-be’ (mpandeha marobe ambony moto iray).
Mampahafantatra ny Glasshouse fa noho ny antony ratsy dia voararan'ny governemanta foibe ny fahitalavitra Sindh TV.
Nahoana no tian'izy ireo i Pakistan? Manana ireo antsipirihany i Shirazi avy amin'ny Light Within mikasika ireo vorona mpifindramonina mitsidika mitsidika an'i Pakistan mba hialàna lavitra ny ririnina.
Mieritreritra i Mahisha fa tsy tokony ampiasaina handratràna olona amin'ny tsy misy ilàna azy ny fahalalahana maneho hevitra.
Manohitra ny herisetra ara-batana ny Indi.ca araka ireo fampianaran'i Bouddha.